सात दिन भित्र तपाइले सोचेको काम बन्नेछ। ॐ लेखि सेयर गरौं – Allindiabc
साउदी र यूएईमा फेरि बढ्यो कोरोना संक्रमण
काठमाडाैँ उपत्यकामा सवारी दुर्घटना १४५ को मृत्यु
अस्ट्रेलियामा चिनियाँ भिडियो एप टिकटक माथि प्रतिबन्धको माग
प्रधानमन्त्री पद नया पुस्तालाइ सुम्पेर बृद्द्भत्ता खाएर बस्ने केपि ओलिको घोषणा
होसियार काठमाडौं उपत्यका बाशि हरुका लागिअर्को डरलाग्दो खबर
काठमाण्डौमा ठाउँमा ५० प्रतिशत घरभाडामा छुट
भर्खरै अस्ट्रेलियाका अर्थमन्त्रीद्वारा राजनीतिक जीवनबाट विश्राम लिने घोषणा
अस्ट्रेलियाका मेलबर्न र सिड्नीको सीमा बन्द
मध्यरातमा २७ वर्षीय सञ्जयको मकै बारीमा शव फेला
कतारमा कोरोना संक्रमितको संख्या लाख नाघ्यो
Home/रोचक खबर/सात दिन भित्र तपाइले सोचेको काम बन्नेछ। ॐ लेखि सेयर गरौं
0 151 17 minutes read
काठमाडौं।सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ।
त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस7दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!! अन्यथा अनिस्ट हुनेछ बरिस्ठ3जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भयो ॐॐॐॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ !
शिवलिंगको अर्थ शिवको प्रतीक भन्ने हुन्छ । पुरुष लिंगको अर्थ पुरुषको प्रतीक भन्ने हुन्छ । यसैगरी स्त्रीलिंगको अर्थ स्त्रीको प्रतीक भन्ने हुन्छ । र नपुसंक लिंगको अर्थ नपुसंकको प्रतीक भन्ने हुन्छ । आखिर के हो त शिवलिंग ? शुन्य, आकाश, अनन्त, ब्रह्माण्ड र निराकार परमपुरुष भएकाले यसलाई लिंग भनिएको हो ।
स्कन्दपुराणमा आकाश स्वयंम लिंग हो भनिएको छ । शिवलिंग वातावरणसहित घुमिरहेको धर्ति तथा सारा अनन्त ब्रह्माण्डको अक्ष धुरी नै लिंग हो । शिवलिंगको अर्थ अनन्त हुन्छ । अर्थात यसको कुनै सुरुवात पनि हुन्न र अन्त पनि । शिवलिंगको अर्थ लिंग वा योनी होइन ।
वास्तवममा यस्तो ब्याख्या दिगभ्रमित गर्नका लागि अंग्रेजहरुले गरेका हुन् । हामीलाई नै थाहा छ, एउटा शब्दलाई भिन्न—भिन्न भाषामा अलग—अलग अर्थ निकाल्न सकिन्छ । त्यसैले शिवलिंगको अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, ब्यवहार वा प्रतीक हो । धर्ती यसको पिठ्यु र आधार हो । त्यसैले अनन्त शुन्यबाट पैदा हुन्छ, त्यसैमा लय हुनाका कारण यसलाई लिंग तथा अन्य विभिन्न नामबाट समेत सम्बोधन गरिएको हो ।
जस्तोः प्रकाश स्तम्भ/लिंग, अग्नी स्तम्भ/लिंग, उर्जा स्तम्भ/लिंग आदि । ब्रह्माण्डमा दुई चीज छन् उर्जा र पदार्थ । हाम्रो शरीर पदार्थबाट निर्मित हुन्छ भने आत्मा उर्जा हो ।
केवल शिव लाइनै निराकार लिंग काे रूप मा पूजा गरीन्छ । लिंग रूप मा समस्त ब्रह्मांड काे पूजा हुन्छ र हिन्दु धर्म अनुसार वहा लाइ समस्त जगत काे मालीक मानीदै अाएकाे छ । यसकारण शिव मूर्ति र लिंग दुबै रूप मा पूजा गरीन्छ । ‘शिव’ का अर्थ हुन्छ– ‘परम कल्याणकारी’ र ‘लिंग’ का अर्थ – ‘सृजन’ पनी हाे ।
वेद मा उल्लेख भएअनुशार वेद र वेदान्त मा लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर काे लागी हाे याे सूक्ष्म शरीर १७ तत्वों ले बनेकाे हुन्छ। मन, बुद्धि, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, र पांच वायु. वायु पुराण काे अनुसार प्रलयकालमा समस्त सृष्टि जहा लीन हुन्छ र पुन: सृष्टिकाल मा जहाबाट प्रकट हुन्छ तेसैलाइ लिंग भनीन्छ । यस प्रकार विश्व काे संपूर्ण ऊर्जा नै लिंग काे प्रतीक हाे ।
यसकारण श्री शिवमहापुराण सृष्टिखंड अनुसार सृष्टि काे पालनकर्ता विष्णु ले एक पटक, सृष्टि काे रचयिता ब्रह्मा काे साथ निर्गुण-निराकार-अजन्मा ब्रह्म(शिव) काे प्रार्थना गर्नु भयाे ‘भाेलेनाथ हजुर कसाेगरी प्रशन्न हुनुहुन्छ’ प्रभु शिव ले भन्नुभयाे, ‘यदि मलाइ प्रसन्न गर्ने हाे भने शिवलिंग का पूजा गर्नु । जब जब कुनै प्रकार काे संकट या दु:ख हुन्छ शिवलिंगमा पूजा गर्नाले समस्त दु:ख काे नाश हुन्छ । जब देवर्षि नारद ले श्री विष्णु लाइ श्राप दिय र पछि पश्चाताप गर्नु भयाे तब श्री विष्णु ले नारदजी लाइ पश्चाताप काे लागी शिवलिंग काे पूजा, शिवभक्तकाे सत्कार, नित्य शिवशत नाम काे जप गर्न बताउनु भयाे ।
अन्य समाचार, काठमाण्डौ – दुबईमा मास्क राम्रोसँग नलगाउनेलाई कारबाही हुने भएको छ । नाक, मुख नढाकी मास्क लगाउनेलाई यूएईको दुबई प्रान्तले एक हजार दिर्हाम जरिवाना तोकेको हो ।
मास्क राम्रोसँग नलगाउँदा सङ्क्रमण फैलिने जोखिम भएको भन्दै जरिवाना तोकिएको दुबई प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै गल्फ न्यूजले लेखेको छ । अहिले दुबईमा लकडाउन केही खुकुलो गरेपछि रेस्टुरेन्ट, समुद्री किनारा तथा पार्कमा मान्छेको चहलपहल बढेसँगै मास्क लगाउनुपर्ने नियममा पनि कडाइ गरिएको हो ।
मास्कले मुख मात्र छोप्ने, मास्क घाँटीमा झुण्ड्याउने, हातमा समातेर हिँड्ने, पाइन्टको गोजीमा राख्ने गरेको भन्दै यसको सहि प्रयोग गराउन जरिवाना तोक्नुपरेको दुबई प्रहरीले जनाएको छ ।
दुबई प्रहरीका अनुसार मार्च २६ देखि अप्रिल १६ को बीचमा मेडिकल मास्क नलगाउने र शारीरिक दूरी कायम नगर्ने १० हजार दुईसय ८६ जनालाई जरिवाना गरिएको थियो ।
अन्य समाचार, धार्मिक मान्यता छ, भगवान सर्वत्र छन्, सर्वब्यापी छन् । हर कण–कणमा भगवानको वास रहन्छ ।त्यसैले मनुष्य भगवानलाई प्रसन्न पार्न हरसम्भव प्रयाश गर्दछ । भगवानबाट आफ्नो मनकामना पुर्ण होस् भनेर अनेक उपाय गर्दछ ।
तर पनि उसको मनचाह फल पाउन सक्दैन । तर शास्त्र अनुसार मानिसले आफुले चाहेको वर पाउन केहि व्रत तथा नियमको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हरेक मनोकामनाका लागी अलग अलग व्रत र त्यसका नियमहरु रहने गरेका छन् । यदि कोहि सन्तान प्राप्तिको मनोकामना राख्दछ भने उसले त्रयोदशीको व्रत बस्नु पर्छ ।
यदि कसैलाई विवाहमा अड्चन आइरहेको छ भने बिहीबारको व्रत बस्नु पर्दछ । त्यस्तै कुनै अन्य मनोकामना पुरा होस् भन्ने चाहना छ भने एकादशीको व्रत बस्नु उपयुक्त हुन्छ । यी व्रतका नियमबारे जानकारी लिनुहोस् ।
सन्तान प्राप्तिको व्रत र नियम १ सन्तान प्राप्तिका लागी हरेक महिनाको त्रयोदशी तिथिको व्रत बस्नु पर्दछ ।२ यस व्रतको दिन केवल जलाहार वा फलाहार मात्र ग्रहण गर्नुपर्दछ ।३ त्यस दिन बिहान र साझँ ११ माला ‘ॐ नमः शिवाय’ को जप गर्नुपर्दछ ।४साझँमा शिव मन्दिर गई दर्शन गरेर मात्र भोजन गर्नुपर्दछ ।
विवाहको अड्चन हटाउने व्रत र नियम १ विवाहको अड्चन हटाउन वा विवाहको कामना पुरा गर्न ११ बिहीबारको व्रत बस्नुपर्दछ ।२ व्रतको दिन बिहान सबेरै उठेर नुहाई पहेलो वस्त्र धारण गर्नुपर्दछ ।३ व्रतका क्रममा पवित्र जल केराको बोटमा अर्पण गरी १६ पटक परिक्रमा गर्नुपर्दछ ।
४त्यसपश्चात ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रको १ सय ८ पटक जप गर्नुपर्दछ ।५ व्रतको दिन सूर्यास्त हुनुपुर्व कुनै पनि पहेलो चीजको सेवन गर्नुहुदैन ।६ बिहीबारको दिन नुनको सेवन गर्नुहुदैन ।७ साझँमा पनि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रको जपगर्नुपर्दछ ।
मनोकामना पुर्ण गराउने व्रत र नियम १धार्मिकशास्त्र अनुसार एकादशी व्रत सबैभन्दा महत्वपुर्ण र शुभ फलदायी व्रत मानिन्छ । शुक्ल र कृष्ण पक्ष तिथि गरी महिनामा दुई पटक एकादशीको व्रत हुने गर्दछ । दुबै व्रतको फल समान हुन्छ ।३ यस व्रतको दिन शुद्ध जलीय आहार मात्र ग्रहण गर्नु पर्दछ ।
४ यदि निर्जल व्रत बस्न सकेमा एकादशी व्रतले अद्भुत परिणाम दिने मान्यता छ ।५ यस व्रतका क्रममा इष्ट देवता वा विष्णु भगवानसंगै शिवको आराधना गर्नु पर्दछ ।६ एकादशी व्रतमा चारै बेलामा आराधना गरे मनोकामना पुर्ण हुने मान्यता छ ।
७ व्रतको भोलीपल्ट बिहान एकछाक भोजन आवश्यकता भएकालाई दान गरी कागती पानि खाएर मात्र उपवास समाप्त गर्नुपर्दछ । आजतकबाट
एजेन्सी- विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाका कारण विश्व त्रसिद छ । दैनिक जनजीवनका काममा मानिसहरु निस्किन सकिरहेका छैनन् ।
सामाजिक संस्कारमा पनि कोरोनाको प्रभाव परेको छ । कोरोनाको कहरकै बीच अमेरिकामा एक जोडीले गरेको विवाह अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेकाे छ ।
कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको मुलुकमा भएको यो विवाह त्य पनि लकडाउनकाबीच कसरी भयो भन्ने कौतुहलता सबैमा लाग्न सक्छ ।
विश्वभरका मानिसहरु कोरोनाको कहरले घरभित्रै रहेको अवस्थामा यी जोडीले सामाजिक दुरी कायम गर्दै सभ्य रुपमा विवाह गरे ।अमेरिकाको टेक्सास राज्यको अस्टिन सहरमा यी जोडीले विवाह गर्दा २ सय जन्ती अनलाइन सहभागी भएको बताइएको छ ।
केटलिन डिलवर्थ र इथन पोलाकको विवाहमा उनीहरुले सहभागी हुनका लागि पाहुनाहरुलाई अनलाइनमार्फत नै जानकारी दिएका थिए ।करिब २ सय आफन्तजनहरु अनलाइनमा सजिएर आएका र वर बधुलाई अनलाइनमार्फत नै बधाई र आर्शिवाद दिएका थिए ।
अन्य समाचार, काठमाण्डौ – मलेसियाले कोरोना सङ्क्रमण रोकथामका लागि लकडाउनको अवधि चार हप्ता थप गर्दै जुन ९ सम्म पुर्‍याएको छ ।
यसअघि मे १२ सम्मका लागि तोमिएको लकडाउन चार हप्ता बढाउँदै जुन ९ सम्म पुर्‍याएको मलेसियाली प्रधानमन्त्री तान सिर मुहाइदिन याशिनलाई उद्धृत गर्दै द स्टारले लेखेको छ ।
मलेसियाले कोरोना सङ्क्रमण रोकथामका लागि मार्च १८ देखि लकडाउन घोषणा गरको हो । मे ४ देखि भने लकडाउन केही खुकुलो बनाइएको छ । मलेसियामा आर्थिक गतिविधि लगभगजसो सुरुवात भइसकेको छ । होटल, कलकारखाना लगायतका क्षेत्रहरु खुलेका छन् । तर निश्चित सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ ।
यस्तै मलेसियाले लकडाउनको समय बढाएसँगै भिसाको अवधि सकिएकालाई १४ दिनभित्र देश छाड्न दिएको समय पनि पछाडि धकेलिएको छ ।
मलेसियाले जनवरी १ देखि भिसा सकिएका नेपाली सहित विदेशी नागरिकलाई लकडाउन सकिएको १४ दिनभित्र मलेसिया छाड्न निर्देशन दिएको छ । यसरी स्वदेश फर्कंदा कुनै जरिवाना तिर्न पर्दैन र मलेसियाली अध्यागमनमा कुनै कागजात पनि देखाउन पर्दैन । टिकट भएपछि सिधै स्वदेश फर्कन सकिन्छ ।
काठमाडौं। संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) रहेका २२ जना नेपाली कामदारहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ। युएईको सारहजास्थित एक सफाइ कम्पनीमा कार्यरत २२ नेपाली महिला कामदारमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको हो। उनीहरूमा एकै पटक सङ्क्रमित देखिएको हो।
गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) युएईका क्यूआरएफ टिम नेपालका संयोजक पासाङ शेर्पाका अनुसार सारहजाको एक कम्पनीमा एकै दिनमा ६१ जना महिला कामदारहरूमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो। जसमध्ये २२ जना नेपाली महिला रहेका छन्।
सङ्क्रमित हुनेहरूलाई कम्पनीले आफ्नै क्वारेन्टाइन बनाएर अलग राखेको छ। तर क्वारेन्टाइनमा अलग्गै बाथरुम र शौचालय नभएकोले सङ्क्रमण नभएका अन्य कामदारहरू समस्या रहेको शेर्पाले बताए। उक्त कम्पनीमा एक सयको हाराहारीमा नेपाली महिला कामदार कार्यरत छन्।
जो त्यहाँ स्कुल, कलेज, बैंकलगायत विभिन्न कार्यालयमा हाउस किपिङको काम गर्छन्। एनआरएनए युएईका अध्यक्ष प्रकाश कोइरालाका अनुसार अहिलेसम्म युएईमा १ सय ४९ नेपाली कोरोना सङ्क्रमित भएका छन्। तीमध्ये ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने २७ जना निको भएका छन्
सोमबारको दिन देवताको पनि देवता आरध्यदेवi महादेवको पूजा गरिन्छ । अविवाहित नारीले सुयोग्य बर पाउन तथा पतिको दीर्घायूको कामनासहित विवाहिता नारीले भगवान शिवको पूजा आरधना गर्ने गर्दछन् ।यो दिन सेतो रंगको कपडा लगाउने र सेतै रंगको वस्तुहरुको दान गरेमा विशेष फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ ।
त्यस्तै सोमबारका दिन भगवान शिवप्रति समर्पित भई शिव स्तोत्र, रुद्राक्ष, बेल पत्ताको पूजा गर्नाले भगवान शिव प्रशन्न हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । त्यस्तै श्रद्धा भाव राख्दै निम्न पाँच काम गर्नाले पनि मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ ।
३.त्यस्तै सोमबारको विहान बेलपत्रमा सेतो चन्दनको टीका बनाएर शिवलिंगको पूजा गर्नाले पनि फलिफाप हुन्छ ।४. सोमवारका दिन आफ्नो पायक पर्ने शिव मन्दिरमा पुगेर शिवलिंगमा दूध चढाउनुपर्छ ।
उक्त दूध तामाको भाडामा ल्याएर आफ्नो व्यापार व्यवसाय गरेको ठाउँमा पूर्ण श्रद्धाका साथ छर्किदै ‘ॐ नमः शिवायः’ मन्त्रको जप गर्नाले व्यवसायमा श्रीवृद्धि हुने मान्यता राखिन्छ ।५. ‘ॐ नमो धनदाय स्वाहा’ मन्त्र कुनै शिव मन्दिरमा गएर रुद्राक्षको मालाले ११ पटक जप गर्नुहस् । यस मन्त्रको जप गर्नाले धन लाभ हुने धार्मिक विश्वास छ ।
अन्य समाचार, सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न शक्ति पीठमध्येको एक बडिकेदारको जात्रा (मेला) आज रातिदेखि शुरु हुँदैछ । बडिकेदारको दर्शन गरेमा मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास छ ।
थारू समुदाय र भारतको उत्तर प्रदेशका विभिन्न ठाउँबाट बडिकेदार आउने दर्शनार्थीको बिहीबारदेखि नै घुइँचो लागेको बडिकेदारका भराडी हर्कबहादुर बोहराले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दर्शनार्थी दुई÷तीन दिनदेखि आउने क्रम शुरु भएको छ, बर्सेनि हजारौँ तीर्थालुको यहाँ भीड लाग्छ ।” यहाँबाट अपी र सैैपाल हिमाल देख्न सकिन्छ ।
बडिकेदारमा हरेक वर्ष दुई पटक मेला लाग्छ । फागुनमा महाशिवरात्रि तथा कात्तिकमा बैकुण्ठ चतुर्दशीमा मेला लाग्छ । शिवरात्रिमा भन्दा कात्तिकको बैकुण्ठ चतुर्दशीमा लाग्ने मेलामा दर्शनार्थीको बढी भीड हुने गरेको बडिकेदार मेला व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टोपबहादुर चन्दले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “त्रयोदशीको राति र चतुर्दशीको दिउँसो बडिकेदारको दर्शन गर्न भारत र तराईबाट थारू समुदाय बढी सङ्ख्यामा आउने गरेको छ ।” डेउडा खेलले मेलामा झनै रौनकता छाउँछ । रासस
यो पनि हेर्नुहोस्ः सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक अभाव….कर्मचारी समायोजनको सकस चलिरहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक अभाव देखिएको छ ।
सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायल, राजपुरका अनुसार डोटीसहित समग्र सुदूरपश्चिममा १०४ चिकित्सकको अभाव छ । यहाँका अधिकांश चिकित्सकले समायोजनमा सङ्घ रोजेपछि स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको अभाव देखिएको हो । डोटी जिल्ला अस्पतालमा लामो समयदेखि मेडिकलसुपरिटेन्डेन्ट पद रिक्त छ । यहाँ तीन स्वास्थ्य अधिकृतको दरबन्दी रहे पनि हाल दुई जना मात्र कार्यरत छन् । नवौँ र दशौँ तहका चिकित्सकको दरबन्दी खाली रहेको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ ।
पच्चीस श्ययाको अस्पतालमा दुई चिकित्सक, एक स्वास्थ्य सहायक, दुई अहेव, एक स्टाफ नर्स तथा दुई अनमीको दरबन्दी रिक्त छ । यस्तै बोगटान फुडसील गाउँपालिकास्थित केदारअखडा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डेढ वर्षदेखि चिकित्सक अभाव छ ।
यहाँ स्वास्थ्य सहायकले उपचार भइरहेको स्थानीयवासी हेम बलमे बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चिकित्सकको माग गरेको ग¥यै छौँ, सुनवाई भएको छैन ।” जोरायल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि लामो समयदेखि चिकित्सकको अभाव छ । यहाँ स्वास्थ्य सहायकका भरमा बिरामीको उपचार भइरहेको छ ।
डडेल्धुरा अस्पताल सङ्घ सरकारको मातहतमा छ भने सेती र महाकाली तथा जिल्ला अस्पताल प्रदेश सरकार मातहतमा छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्यचौकी स्थानीय तह मातहत गएपछि हरेक स्वास्थ्य संस्थामा सरकारी दरबन्दीका चिकित्सकदेखि अनमी, अहेबसम्मका स्वास्थ्यकर्मीको अभाव रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत सेती प्राविधिक अस्पताल (साविकको सेती अञ्चल अस्पताल) कैलाली, महाकाली अञ्चल अस्पताल कञ्चनपुर, तथा पहाडी जिल्ला बैतडी, दार्चुला, डोटी, बझाङ, बाजुरा र अछामका जिल्ला अस्पताल र कैलालीको टीकापुर अस्पताल छन् । डडेलधुरा अस्पतालमा १९ चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त छ भने स्थानीय सरकार मातहत रहेका डडेलधुराको जोगबुडा अस्पतालमा पाँच चिकित्सकको दरबन्दी रहेकामा सबै दरबन्दी रिक्त छ ।
डडेल्धुरा अस्पतालमा सरकारले १०९ जनाको दरबन्दी रहने गरी स्वीकृति दिएको छ । स्वीकृत दरबन्दीमध्ये ३७ जनाको मात्रै पदपूर्ति भएको छ । पछिल्लो समय यहाँका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको चाप बढे पनि चिकित्सक नहुँदा सबैले सेवा पाउन नसकेको दिपायलका स्थानीयवासी दिव्यराज पाठकले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अस्पातलमा बिरामीको चाप दिनहुँ बढ्न थालेको छ, चिकित्सक नहुँदा बिरामी मारमा परेका छन् ।” यस्तै अछाम जिल्ला अस्पतालमा दुई चिकित्सकको स्थायी दरबन्दी रहे पनि लामो समयदेखि दुई करारका चिकित्सकले सेवा दिइरहेका छन् । चौरपाटी गाउँपालिकाको चौरमाडौँ प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र र कमलबजार नगरपालिकाको प्राथमिक स्वास्थ केन्द्रमा दुई चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त छ । रासस
एजेन्सी । गएको २४ घन्टायता भारतमा एक हजार ३८३ कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित थपिएका बुधबार बिहान जनाइएको छ । बुधबार बिहानको तथ्यांकअनुसार भारतमा ‘कोविड १९’ का संक्रमितहरूको संख्या १९ हजार ९८४ जना पुगेको यहाँँको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उक्त मन्त्रालयका अनुसार भारतभर गएको २४ घन्टायता मृत्यु हुनेको संख्या ५० जना रहेको छ । योसँगै भारतमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान जानेको संख्या ६४० पुगेको छ । भारतमा देखिएका यी संक्रमितहरूमध्ये ३ हजार ८६९ जना भने उपचारपछि निको भएर फर्किएका छन् । मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार हाल यहाँ १५ हजार ४७४ कोरोनाका संक्रमित विरामी अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन् ।
शुरुदेखि नै भारतको महाराष्ट्र कोरोना भाइरसबाट अत्यन्त प्रभावित राज्यको रूपमा रहेको यहाँँको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ । मङ्गलबार पनि यो क्रम जारी नै रहेको उक्त मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
महाराष्ट्र राज्यमा मात्र संक्रमितहरूको संख्या ५ हजार २१८ जना पुगेको उक्त मन्त्रालय बताएको छ । यसैबीच महाराष्ट्रमा २५१ जनाको निधन भएको छ । स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले आज दिएको जानकारीअनुसार कोरोना संक्रमण दोस्रो स्थानमा भारतको गुजरात राज्य रहेको छ ।
गुजरात २ हजार १७८ जनामा कोविड–१९ संक्रमण देखिएको छ । त्यसैगरी भारतको दिल्ली कोरोना संक्रमणको तेस्रो स्थानमा रहेको र यहाँ २ हजार १५६ जनामा संक्रमण देखिएको छ । भारतमा यसरी दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ संक्रमितहरू थपिँदै जानु चुनौतीपूर्ण भएको यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जनाएका छन् । भारतको राजस्थान, तामिलनाडू, मध्यप्रदेश र केरला राज्यमा उच्च संख्या कोरोना संक्रमित रहेका जनाइएको छ ।
भारतमा संक्रमण बढदै गएपछि सरकारले कोरोना भाइरस ९कोविड–१९० को संक्रमण रोक्नको बन्दाबन्दी (लकडाउन) लाई आगामी मे महिनाको ३ तारिखसम्म लम्ब्याएको घोषणा गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत महिना घोषणा गर्नु भएको २१ दिने लकडाउनको अवधि समाप्त हुँदै गरेको अवस्था पुनः १९ दिनको लकडाउनलाई जोडिएको घोषणा गरेका थिए । –एएनआई
अन्य समाचार, जेनेभा । विश्वभर फैलिएको कोरोनाभाइरस महामारीबाट युरोपेली मुलुकहरु र संयुक्तराज्य अमेरिका सबैभन्दा बढी आक्रान्त बनेका छन् । जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार नेपाली समयअनुसार बुधबारबार मध्यान्हसम्ममा संयुक्तराज्य अमेरिकामा ४५ हजार ३४३ जनाको मृत्यु भएको छ भने युरोपेली मुलुकहरुमा मृतकको संख्या १ लाख ७ हजार ९२० जना पुगेको छ ।
यो समेत विश्वभर कोरोनाभाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख ७७ हजार ६८८ पुगेको छ भने कूल संक्रमितको व्यक्तिको संख्या २५ लाख ५७ हजारभन्दा माथि पुगेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन समेतका संस्था एवं विज्ञहरुले महामारी नियन्त्रणका लागि लकडाउन नै उपयुक्त विधि रहेको निश्कर्षमा पुगे पनि संयुक्तराज्य अमेरिका र युरोपका केही मुलुकमा मानिसहरु लकडाउन खोल्नु पर्ने भन्दै विरोध प्रदर्शनमा पनि उत्रिएका छन् ।
युरोपेली मुलुकहरुमध्ये इटालीमा २४ हजार ६४८ जना, स्पेनमा २१ हजार २८२ जना, फ्रान्समा २० हजार ७९६, बेलायतमा १७ हजार ३३७ जना, बेल्जियममा ५ हजार ९९८ जना, जर्मनीमा ५ हजार ८६ जना, नेदरल्यान्ड्समा ३ हजार ९१६ जना, स्वीडेनमा १ हजार ७६५ जना, स्वीट्जरल्यान्डमा १ हजार ४७८ जनाको मृत्यु भएको छ । –एपी
अन्य समाचार, एजेन्सी । नयाँ दिल्लीमा रहेका सरकारी अस्पतालमा अबदेखि सञ्चारमाध्यमले कामगर्ने कार्यकक्ष (मिडिया सेल) राखिने भएको छ । मङगलबार नयाँ दिल्ली सरकारले यो आदेश दिएको थियो । नयाँ दिल्लीमा रहेका सबै सरकारी अस्पतालहरुले कोविड १९ बारेको समाचार र सूचना सम्प्रेषणका लागि यो आवश्यक रहेको भन्दै यहाँको सरकारले उक्त सेल स्थापनाको लागि आदेश दिएको थियो ।
सरकारको यो आदेशसँगै यहाँका अस्पतालहरुमा अब सूचना संकलन गरेर विस्तार गर्नका लागि यस्तो मिडिया सेलको स्थापना हुने भएको समाचारमा जनाइएको छ । यस्तो सेलबाट सम्पादन हुने सूचनाले सही रुपमा नागरिकसमक्ष कोभिड १९ बारेको जानकारी पुग्ने बताइएको छ ।
अहिले कोविड १९ का विषयमा सञ्चारमाध्यमहरुका साथै सामाजिक सञ्जालमा पनि विभिन्न खाले फरक फरक समाचार आएकोले नागरिकलाई दुविधा भएको भन्दै ती सबैखाले सूचनालाई एकै ठाउँबाट र सही मात्रामा सम्प्रेषण गर्ने यसले सहयोग पुग्ने दिल्ली सरकारले जनाएको छ ।
सोमबार नयाँ दिल्लीको एक सरकारी अस्पतालमा ज्वरो आएर पुगेका एकजना पुरुषलाई कोरोना भाइरसको त्रासले त्यहाँका चिकित्सकले उपचार गर्न नमानेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आएको थियो । ती पुरुषलाई चिकित्सकले शुरुमा कोरोनाको त्रासले छुनै नमानेका र पछि उनी यसका संक्रमित भएको पुष्टि भएपछि उपचार नपाएको उनकी छोरीले बताएकी छिन् ।
आफ्ना बुबाले भारतको राजधानीजस्तो नयाँ दिल्लीकै सरकारी अस्पतालमा पनि उपचार नपाएको भन्दै बोलेको भिडियो यहाँका सामाजिक सञ्जालमा व्यापक मात्रामा प्रचार प्रसार गरिएको थियो । त्यसपछि यस रोगसम्बन्धी समाचारहरुलाई व्यवस्थित र विश्वास गर्न योग्य बनाउनका लागि यस्तो अलग्गै मिडिया सेलको स्थापना गर्न नयाँ दिल्ली सरकारले आदेश दिएको थियो । –एएनआई
गत चैत ३ गते बेल्जियमबाट नेपाल उड्दै गर्दा उनलाई एउटै कुराको मात्र चिन्ता थियो– कक्षा ११ को परीक्षा । २०७७ वैशाख २१ गतेदेखि सुरु हुने भनिएको परीक्षाका लागि तयारी गर्नुपर्ने भन्दै उनी डेढ महिना अघि नै बेल्जियमबाट उडेकी थिइन् ।
चैत ४ गते काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिँदा स्थिति सामान्य थियो । सबै सामान्य तरिकाले आ–आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागिरहेका थिए । उनले पनि आफ्नै घरतिरको बाटो सोझ्याइन् । यती एयरको विमानबाट पोखरा हुँदै उनी जीप चढेर बागलुङ नगरपालिका–४ स्थित कुँडुलेस्थित घर पुगिन् चैत ४ गते साँझ नै ।
उनै अन्शु सापकोटालाई घर पुग्दासम्म पनि अरु खासै केही चिन्ता थिएन परीक्षाको बाहेक । उनी पुग्दा घर–परिवारमा छुट्टै खुसी छायो । हजुबा–हजुरआमासँग बस्दै आएकी उनी करिव चार महिनाको बेल्जियम बसाइपछि घर फर्किएकी थिइन् । केही महिनादेखि खाली–खाली भएको घर उनको आगमनसँगै पूर्ण भएको थियो । हजुरबा–हजुरआमा नातिनी घर आएसँगै दङ्ग थिए ।
१४/१५ वर्ष भैसक्यो बुबा आमा बेल्जियम बसेको, उनी भने हजुबा–हजुरआमासँग बागलुङ, कुँडुले घरमा बस्दै आएकी छिन् र गाउँकै स्कूलमा हाल कक्षा ११मा अध्ययनरत छिन् । समय समयमा आमाबुबालाई भेट्न बेल्जियम पुग्ने गरेकी उनले कहिल्यै सोचेकी थिइनन् कि यो पाला यसरी बाटोमै भाइरसले आक्रमण गर्ला भनेर ।
जब कोरोना संक्रमणको शंका भयो
अन्शु उनै हुन् जसलाई गत चैत १५ गते कोरोनाभाइरस संक्रमण भएको पुष्टि भयो । ४ गते घर पुगेकी उनी सामान्य तरिकाले नै बसिरहेकी थिइन् । विश्वभरी महामारीको रुप लिँदै गरेको कोरोनाभाइरसको संक्रमणबारे जानकार थिइन् उनी । बेल्जियमबाट आउँदा पनि मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्दै सतर्कता अपनाएको र घर आएपछि पनि सुरुमा परिवारसँग सँगै बसे पनि सतर्कता अपनाएको उनी बताउँछिन् ।
उनका बुबा उनीभन्दा केही समय पहिला नै नेपाल आउनु भएको थियो । जब अन्शुलाई चैत ७ गते अचानक ज्वरो आयो, उनी र उनका परिवार आत्तिए । रुघा र अलि–अलि खोकी पनि लाग्यो । सोही बेला कतार एयरवेजको जहाजमा आएकी एक यात्रुमा कोरोना पोजिटिभ आएको खबर एकाएक फैलिएपछि उनलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । अन्शुलाई भने सामान्य औषधिले नै निको भइरहेको थियो ।
यतिले मात्रै शंकाको दुरी घट्नेवाला थिएन । उनको पनि स्वाब परीक्षणका लागि लगियो र चैत १५ गते कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पुष्टि भयो ।
अन्शु १९ वर्षकी भइन् । भन्छिन्, ‘आफूले सतर्कता अपनाउँदा अपनाउँदै पनि संक्रमण हुँदा सुरुमा त विश्वास नै लागेन । सामान्य अवस्थामै छु भन्न नहुने रहेछ । कसरी संक्रमण भयो पत्तै भएन ।’
संक्रमण पुष्टि भएकै दिन चैत १५ गते उनलाई बागलुङको धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा भर्ना गरियो । त्यसपश्चात अस्पतालकै आइसोलेशन वार्डमा उपचाररत छिन् अन्शु । सामान्य अवस्थामा रहेकी अन्शुको हालसम्म ४ पटक कोरोना परीक्षण भइसक्यो तर सबै रिपोर्ट पोजिटिभ आएका छन् । उनी रिपोर्ट नेगेटिभ आउने दिनको प्रतीक्षामा छिन् ।
हामीसँगको कुराकानीमा उनी बारम्बार भनिरहन्थिन्, ‘यो सामान्य हो, म सामान्य नै छु, केही समस्या आएको छैन र छिट्टै म पनि निको भएर घर जान्छु ।’
अझ अहिलेसम्म ५ जना निको भएर घर फर्किइसकेका छन् । यसले पनि अन्शुलाई छिटै निको हुन आत्मबल मिलेको छ ।
ममीको धेरै फोन आउँछ
अन्शु आइसोलेशनमा बसेको वैशाख ९ गते २५ दिन भयो । धेरैजसो समय उनको ममी (आमा, जो बेल्जियममै हुनुहुन्छ)सँग कुरा गरेर बित्छ । हरेक पटक आमाले ठिक हुन्छ भन्दै उत्साह भर्ने गरेको उनी बताउँछिन् । बाँकी समय साथीहरुसँग कुराकानी गर्ने, यूट्यूवमा फिल्म हेर्ने अनि पढाइमा बिताउने गरेकी छिन् ।
आधा दिनजसो त साथीभाईहरुसँग कुराकानी गरेरै बित्छ अन्शुको । साथीहरु उनी अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुने दिनको प्रतीक्षामा छन् । अन्शु पनि आफूलाई छिट्टै निको हुनेमा आशावादी छिन् ।
अस्पताल भर्ना हुँदा उनी शून्यजस्तै थिइन् । कारण, उनलाई समाजमा कतिले रोग लिएर आइ भनेर त्यति राम्रो मानेनन् त, कतिले निको हुन्छ भन्दै ऊर्जा भर्ने काम गरे । तर उनलाई आफूमाथि आरोप लगाउने र अर्कै दृष्टिले हेर्नेहरुसँग निकै चित्त दुखेको छ । संक्रमणको भन्दा पनि समाजको भयले पोल्यो अन्शुलाई ।
अन्शु भन्छिन्, ‘मलाई संक्रमण भएको थाहा पाउँदा भन्दा पनि गाउँघर तिरका मानिसको व्यवहारले धेरै दुःख लाग्यो । मिडियामा सनसनीपूर्ण खबर आए, मानिसमा अर्कै त्रास पैदा भयो, सबै मसँग डराए । सुरुमा त निकै आत्तिएँ । तर मेरो परिवार, डाक्टरहरुले मलाई साथ दिनुभयो, हौसला दिनु भयो, जसको नतिजा म अहिलेसम्म पनि ठिक छु । आज धेरै शुभचिन्तकहरुले फोनबाट, म्यासेजबाट हौसला दिनुहुन्छ । मेरो शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुहुन्छ, यसले आत्मबल बढेको छ ।’
अस्पताल भर्ना भएको दिनदेखि हरेक दिन ४ देखि ५ पटक आमासँग फोनमा कुरा गर्छिन् अन्शु । आमाको हरेक कल उनका लागि ओखती बराबर छ । कोसौं टाढा रहे पनि आमाको आवाज, आड–भरोसा अनि स्नेह नै उनको उपचारमा ओखती बनेको छ ।
छन त यहाँ धेरै छन् आफन्तहरु, तर सबै उनीसँग डराएका छन् यतिबेला । अनेक आरोप पनि लगाउन नभ्याएका होइनन् । तर उनको कलिलो मष्तिस्कले भ्याएसम्म आफूलाई कमजोर हुन दिइनन् । अहिले त रोगलाई परास्त गर्ने हिम्मत जुटिसकेको उनी बताउँछिन् ।
आमाबुबाले नै हो अन्शुलाई नडराइ बस्न र आफ्नो परिचय नलुकाउन सुझाएको । ‘कोरोना लाग्दैमा परिचय नै लुकाउन जरुरी छैन, तिमी नडराऊ, केही हुँदैन । आत्मबल बलियो बनाऊ, निको हुन्छ,’ आमाले भनेको सम्झिन्छिन् अन्शु । त्यसैले पनि आफूले सुरुबाटै नाम र फोटो गोप्य राख्न जरुरी नठानेको अन्शु बताउँछिन् ।
कोरोनाको संक्रमण कसैमा सर्न पाएन । सतर्कता नअपनाएको भए जे पनि हुन सक्थ्यो, यो कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ । अन्शु आफू संक्रमित भए पनि समाजलाई संक्रमणबाट बचाएकी छिन् । त्यसैले उनी सबैलाई आग्रह गर्छिन्, ‘सतर्क भएर बसौँ, संयमता अपनाएर एक अर्काको भावनाको सम्मान गरौँ ।’
अस्पताल नै घर, डाक्टर अनि नर्स परिवार
अन्शुको अस्पताल बसाई चार हप्ता पुग्न लागिसक्यो । उनलाई अस्पताल अब घरजस्तै लाग्न थालेको छ । सबैजनाले राम्रो केयर गर्ने गरेको उनी बताउँछिन् ।
अन्शुलाई राखिएको अस्पतालको आइसोलेशन कक्ष उज्यालो र घाम आउने छ । उनलाई राखिएको कक्षमा सिसी क्यामेरा जडान गरिएको छ । अस्पतालले दिने खाना राम्रो छ । उनलाई खानाको कुनै समस्या छैन । आफू सामान्य अवस्थामा रहेकाले पनि खाना खान समस्या नभएको र प्रशस्त तातो पानी पिउने गरेको उनी बताउँछिन् ।
कुनै सामानको आवश्यकता परेको बेला सिस्टरहरुलाई फोन गर्छिन् । बिहान–बेलुका दुई पटक डाक्टर चेकजाँचका लागि आउने गरेको र बेला–बेला फोनमा कुरा गर्ने गरेको उनी बताउँछिन् । अब त डाक्टर, नर्स परिवारका सदस्यजस्तै लाग्न थालेको छ उनलाई । अन्शु भन्छिन्, ‘सबैजनाले माया गर्नुहुन्छ, केही चाहियो भने ल्याइदिनुहुन्छ, हौसला दिनुहुन्छ, समय समयमा फोन गरेर के छ, कसो छ भनी बुझ्नु हुन्छ र तिमी ठिक छौ, अब छिट्टै निको हुन्छौं भन्नुहुन्छ ।’
पुनः परीक्षाको तयारीमा अन्शु
अन्शु बेल्जियम आमाबुवालाई भेट्न गएकी थिइन् गत मंसिर (डिसेम्बर)मा । कक्षा ११ को परीक्षा नजिकिँदै थियो । अतः परीक्षाकै लागि भनेर उनी हतार हतार फर्केको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘बेल्जियम गएपछि पनि केही समय त बाहिरतिर डुलेँ, तर पछि भने घरै बसेँ । कसरी संक्रमण भयो भन्ने नै थाहा नहुने रहेछ ।’
अस्पतालको आइसोलेशन कक्षबाट हरेक दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म विश्वलाई नियाल्ने अवसर पनि पाएको उनी बताउँछिन् । उनले आइसेलेशन वार्डको बसाईलाई उपयोगी बनाउन अध्ययनलाई पनि निरन्तरता दिन थालेकी छिन् ।
अन्शु भन्छिन्, ‘बिहान ६ देखि ७ बजेसम्ममा उठ्छु । फ्रेस भएर ब्रेकफास्ट गर्छु, जसमा अण्डा, ब्रेड, दुध, कहिले चिया, बिस्कुट खान्छु । १० देखि ११ बजेमा खाना ल्याइदिनुहुन्छ जसमा सामान्य दाल, भात, तरकारी हुन्छ । दिउँसो २ देखि ३ बजेको समयमा खाजा खान्छु । खाजामा पनि दुध, ब्रेड, बिस्कुट कहिले चाउचाउ, यस्तै हुन्छ । र, बेलुका ७ देखि ८ बजेसम्ममा खाना खान्छु ।’
अस्पताल आएदेखि माछा–मासु नखाएको उनी बताउँछिन् । ‘योबीचमा ममीसँग फोनमा कुरा गर्छु, साथीहरुसँग कहिले च्याट गर्छु त कहिले फोनमा कुरा गर्छु । यूट्यूवमा फिल्म हेर्छु । समाचार पढ्छु ।
आजभोलि मोटिभेसनल भिडियोहरु पनि हेर्ने गरेको छु,’ उनले भनिन्, ‘अब परीक्षाको तयारी पनि गर्नुपर्ने छ, त्यसैले एक हप्ता भयो कोर्सका कितावहरु पठाइदिनुभएको छ घरबाट, यहीँ पढ्न थालेको छु ।’
अन्शु आइसोलेशन वार्डबाटै परीक्षाको तयारी गर्दै छिन् । परीक्षाको मिति अनिश्चित बनेको छ । २१ गतेबाट हुने परीक्षा स्थगित भएको छ ।
अन्शुलाई कहिलेकाहीँ त नरमाइलो पनि लाग्छ । भन्छिन्, ‘यसरी आइसोलेशनमा बसेकाहरुलाई सरकार र परीक्षा बोर्डले केही विचार गरिदिए हुन्थ्यो
Post Views: 7,584
ॐ ॐ ॐ दुर्लभ दाहिने शंखको महत्व जानी शेयर गरे, जिवनमा धन, सम्पती र खुसी मिल्ने छ !
सुत्नु अघि कान्लिचोक भगवती देविको दर्शन गरि हेर्नुहोस भोलि मगलबारको राशिफल पढ़नुहोश साथै भेटि स्वरुप लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोस
ज्योतिषशास्त्र अनुसार: मंगलबारको दिन भुलेर पनि आज नगर्नुहोस यी ३ काम !
संसारकै दुर्लभ सबैभन्दा महंगो चिज जसको एक ग्रामकै मूल्य सयौँ खर्ब रुपैयाँ
कान्लिचोक भगबतीको दर्शन गरि हेर्नुहोस आज आइतबारको राशिफल
दोलखा भिमेश्वरको शिलामा पसिना आयो, स्थानीयको भीड (8,639)
सात दिन भित्र तपाइले सोचेको काम बन्नेछ। ॐ लेखि सेयर गरौं (7,584)
© Copyright 2020, All Rights Reserved | Design by Online Tricks
Sunsari online news
भाग्यमानीले मात्र देख्ने सुन रङ्गको नाग देवतालाई देखेको ३ सेकेन्डमा कमेन्टमा ॐ लेखी सेयर गरेमा मनोकामना पुरा हुनेछ !!! (6,579)
यी ३ काम गरेमा धरमा सधैं लक्ष्मीकाे बास हुनेछ ! (4,052)
यी ५ चिज सिरानी मुनी राख्नुहोस् धन लाभ हुनेछ (3,922)